DEG DEG:- Dagaal aad u culus oo haatan ka soconaaya duuleedka Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
DEG DEG:- Dagaal aad u culus oo haatan ka soconaaya duuleedka Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug
Wararka naga soo gaaraya gobolka Mudug ayaa waxay sheegayaan in duuleedka Bari ee magaalada Gaalkacyo uu goordhaw ka bilawday dagaal u dhaxeeya laba maleeyshiyo beeleed oo ka kala tirsan maamulada Galmudug iyo Puntland.
Dagaalkaasi ayaa inta la xaqiijiyay ku geeriyootay ilaa 10 qof, iyadoona sidoo kale ay ku dhaawacantay 17 qof kale, waxaana dagaalkaasi sida la sheegay ku baxay odayaal dhaqameed iyo waxgarad kasoo kala jeeda laba dhinac.
Dagaalka oo haatan weli soconaaya ayaa ilaa iyo haatan la ogeyn qasaaraha kale uu geystay, iyadoona dadkii ku dhaawacmay dagaalkaasi loo qaaday goobaha caafimaad ee ku yaala magaalada Gaalkacyo, si halkaasi loogu daaweeyo.
Dagaalada u dhaxeeya maleeshiyaadka ka kala tirsan maamulada Puntland iyo Galmudug ayaa mudooyinkii dambe noqday mid dhowr jeer kusoo noq-noqda deegaanada ku yaala gobolka Mudug.
Dhinaca kale, ma jirto war kasoo kala baxay maamulada Galmudug iyo Puntland oo ay kaga hadlayaan dagaalka haatan ka soconaaya duuleedka Bari ee magaalada Gaalkacyo, kaas oo u dhaxeeya laba maleeyshiyo beeleed kasoo kala jeeda labadaas maamul.